सदावहार जर्मनी, दाबेदार जर्मनी : को हुन् जर्मनीका मुख्य प्रतिस्पर्धी ? (टिम विश्लेषण) - Dainik Nepal
सदावहार जर्मनी, दाबेदार जर्मनी : को हुन् जर्मनीका मुख्य प्रतिस्पर्धी ? (टिम विश्लेषण)
साकार लामा २०७५ जेठ २३ गते १८:२०
बिश्वकप फुटबल यस्तो प्रतियोगिता हो, जसमा बिश्वका ३१ राष्ट्रहरु जर्मनसँग फाइनल खेल्न प्रतिस्पर्धा गर्छन्। र, अन्तिममा जित जर्मनीको हुन्छ। बिश्वकप फुटबल इतिहासकै सफल राष्ट्र जर्मनी यसपटक रसियन बिश्वकप २०१८ को मुख्य दावेदार हो। बिश्व बुकमार्कर्सको अनुमान अनुसार जर्मनीको उपाधि सम्भावना बीस प्रतिशत छ। डरलाग्दो ब्राजिल, रहरलाग्दो फ्रान्स, भरपर्दो स्पेन र मेसीको अर्जेन्टिना जर्मनीका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनेछन्। हालै २०१७ मा सम्पन्न भएको कन्फडेरेशन्स कप, रसियाको विजेता जर्मनीलाई युरोपमा भएको प्रतियोगिताहरु फाप्ने गर्छ। उसले आफ्नो ४ मध्ये ३ बिश्वकप युरोपियन भूमिमा नै जितेको थियो।
डरलाग्दो ब्राजिल, रहरलाग्दो फ्रान्स, भरपर्दो स्पेन र मेसीको अर्जेन्टिना जर्मनीका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनेछन्।
बिश्वकपको इतिहासमा १९६२को विजेताराष्ट्र ब्राजिल बाहेक अरु कुनै पनि राष्ट्रले लगातार उपाघीरक्षा गर्ने सकेका छैनन्।तर इतिहास र कृतिमानी रच्न माहिर जर्मन महारथिहरुले यस पटक के गर्लान्,त्यो भने निकै रोचक हुनेछ।
इतिहास रच्ने दाउमा जर्मनी
बिश्वकप फुटबल इतिहासका पान्नाहरु पल्टिँदा टिम जर्मनीको नाम सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ। पछिल्लो पाँच ठूला प्रतियोगितामा जर्मन टिमका व्यवस्थापक रहेका जर्मन कोच योचिमलाई नै रसियामा इतिहास रच्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। २०१४ को बिश्वकपसहित लो को टिमले यी पाँचै प्रतियोगितामा न्यूनतम अन्तिम चारसम्मको यात्रा तय गरेको थियो। यदि योचिम लो कोच छन् भने प्रतिस्पर्धा जित्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ।बिश्वकप इतिहासमा जर्मनीले सबैभन्दा धेरै १२ पटक सेमिफाइनल र ८ पटक फाइनल गरी ४ पटक उपाधि समेत जितेको छ। यस्तो सुनौलो इतिहास जर्मन बाहेक अरु कुनै रास्ट्रको छैन। सन् १९५४, १९७४, १९९० र २०१४ को विजेता र सन् १९६६, १९८२, १९८६ र २००२ को उपविजेता जर्मन रहेको छ। र, सन् २०१८को बिश्वकप जितेर सबैभन्दा धेरै पाँचौपटक जित्ने ब्राजिलको कीर्तिमानीलाई बराबर गर्न जर्मनी चाहन्छ। यस बाहेक बिश्वकपमा लगातार छ वटा पेनाल्टी सुट आउट जितेको इतिहास पनि जर्मनसँग नै छ। जर्मनको यो इतिहासले के बताउँछ भने जर्मनलाई खेलको १२० मिनेटसम्म बराबरी गराइला तर पनि पेनाल्टीमा भएपनि जर्मनीले बाजी मार्छ। यो हो सदाबहार जर्मनीको बिश्वकपमा प्रभाव र सुनौलो इतिहास।
बिश्वकपमा लगातार छ वटा पेनाल्टी सुट आउट जितेको इतिहास पनि जर्मनसँग नै छ। जर्मनको यो इतिहासले के बताउँछ भने जर्मनलाई खेलको १२० मिनेटसम्म बराबरी गराइला तर पनि पेनाल्टीमा भएपनि जर्मनीले बाजी मार्छ।
रन हार्ड, टिम प्ले र स्ट्रोङ्ग मेन्टालिटी
‘फुटबल साधारण खेल हो, जहाँ २२ खेलाडीहरु ९० मिनेटसम्म एउटा बलको पछाडि भाग्छन । र, अन्तिममा जर्मनी टिमका बलिया खुट्टाहरुले खेल जित्छन् ‘- पूर्वबेलायती स्ट्राइकर ग्यारी लङ्करको जर्मन टिम सम्बन्ध यो भनाइ निकै अर्थपूर्ण छ। जर्मन टिममा सँधै शारिरीक रुपमा निकै मजबुत र हाईर स्टेमिना भएका खेलाडीहरु हुन्छन्। र, यो गुण उनीहरूलाई सँधै नेक टू नेक प्रतिस्पर्धामा विपक्षविरुद्ध फाइदा पुर्‍याउँदै आएको छ।टेक्निकल र कुशल प्रदर्शनमा विश्वास राख्ने च्यामियन कोच योचिम लोको सिद्धान्त व्यक्तिगत प्रदर्शन भन्दा पनि समूहगत सफलता हो। सन् २००६ देखि जर्मन फुटबललाई दिशानिर्देश गर्दैआएका लोले जर्मनलाई २०१४ को बिश्वकप जिताएका थिए।
संसारमै सबैभन्दा धेरै प्रो कोच भएको राष्ट्र जर्मनीका राष्ट्रिय कोच लो ले जर्मन फुटबललाई ग्राउन्ड लेबलबाट नै सुधारेका छन्। आफ्नो टिम र जर्मन फुटबलका लागि जस्तोसुकै जोखिम पनि मोल्न नडराउने लोले आफ्ना हरेक निर्णयहरुलाई सफलतामा बदलेका छन्। चाहे त्यो कन्फडेरेसन्स कप २०१७ जित्दा युवा टिम उतारेर होस् या २०१४ को फाइनलमा मारियो गोट्जालाई सव्सिच्युटका रुपमा मैदान प्रवेश गराई बिश्वकप जित्ने गोल गर्ने लगाएर होस्। योचिम लोले प्रत्येक पटक आफूलाई ट्याकटिकल जिनियस् रुपमा सिद्धका गरेका छन्। सन् २००६ देखि नै योचिम लो ले ४-२-३-१ फरमेशनलाई जर्मन सिनियर टिममात्रै नभई सबै उमेर समूह टिमहरुमा अनिवार्य बनाएका थिए। र, टिम जर्मनीले त्यहीँ फरमेशनमा सन् २०१४ को बिश्वकप ब्राजिलमा जितेको थयो । र, फेरि त्यही सफलतालाई रसियन भूमिमा पनि दोहोराउने दाबेदारी प्रस्तुत गर्नेछ।
‘फुटबल साधारण खेल हो, जहाँ २२ खेलाडीहरु ९० मिनेटसम्म एउटा बलको पछाडि भाग्छन । र, अन्तिममा जर्मनी टिमका बलिया खुट्टाहरुले खेल जित्छन् ‘- पूर्वबेलायती स्ट्राइकर ग्यारी लङ्कर
डाईरेक्ट फुटबल खेल्ने जर्मन टिमको डिफेन्स सँधै चुस्त र चनाखो रहने गर्छ। जर्मनका गोलपोष्टको जिम्मा जर्मनी कप्तान मानुयल नेउरको सुरक्षित हातहरुलाई हुनेछ। ब्रायनका कोर तीन डिफेन्डर म्याट हुमयल्स, वोईङ्गटेन र जोसुवा किमिचको जोडीलाई जर्मन डिफेन्सलाइनको जिम्मेवारी रहनेछ। यी चार बाहेक ब्रायनकै अन्य तीन खेलाडीहरु जर्मन टोलीमा छन्। प्रोफेसनल र राष्ट्रिय फुटबल दुबैमा एकसाथ खेल्ने यी सात जर्मन खेलाडीहरुको अभूतपुर्व टिमवर्क नै जर्मन सफलताको राज हो। मिडफल्डमा भने जर्मन राज गर्छ र मिडफिल्डबाटै बिपक्षीमाथि कब्जा जमाउँछ। फर्वाड लाइनमा भने डेउ्चा सफलताको राज जर्मनी स्ट्राइकर्सहरुको खेल चेतना र गति रँहदै आएको छ। जसको पूर्ति थोमस मुल्लर र टिमोले गर्नेछन्।
विजेता मानसिकता, स्क्वाड डेप्थ र अदभूत मिडफिल्ड (सबल पक्ष)
यो विश्वकपमा जर्मन अरु टिम भन्दा फरक र दावेदार हुनुको एकमात्र कारण जर्मनको बिजेता मानसिकता हो।जितलाई आफ्नो बानी बनाएका जर्मनी टिमलाई कसरी ठूला प्रतियोगिताहरु जित्नु पर्छ भन्ने थाहा छ । २०१४ बिश्वकप जितेका आठ खेलाडीहरु सम्मेलित यो टोली विजेताहरुको समूह हो। च्यामपियनहरुले भरिएको जर्मन टिम दबाबमा होस नगुमाई नतिजा आफ्नो पोल्टमा पार्ने गर्छ। विजेता मानसिकतासहित यी बिश्वकपमा उत्रिने जर्मन टिमलाई एउटा दुबिधा भने हुनेछ। यसपटकको टोलीका सबै २३ खेलाडीहरु नै पहिलो ११ मा खेलाउन पर्ने खालका छन्। यो सुबिधाजनक दुबिधा योचिम लो बाहेक अरु कुनै राष्ट्रका म्यानेजरलाई छैन। जर्मन टिममा पहिलो ११ भित्र पर्न खेलाडीहरु बीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ। यस्ता ठूलो प्रतियोगितामा स्कवाड रोटेशनले खेलाडीहरुलाई फिट, फ्रेस र मेहनती रहन मद्दत गर्नेछ। ईंग्लिश प्रमियर लिगको बर्ष युवा खेलाडी २०१८ को उपाधि पाएका लियोरी साने जस्तो प्रतिभाले पनि टिममा मौका पाएनन्। यसबाट पनि जर्मन टोलीको स्कावड डेफ्थ थाहा हुन्छ। यस बाहेक जर्मनको सफलताको राज उसको मिडफिल्ड रहँदै आएको छ। टोनी क्रुज,लियोन गोरेट्जा, जुलियन ड्राक्सलर र मेस्ट ओजिल जस्ता सिर्जनात्मक खेलाडीहरुले भरिएको जर्मन मघ्यभाग लोभलाग्दो छ। यो मिडफिल्ड पास र एसिस्ट मात्रै होइन, गोल पनि लगातार गर्ने गर्छ। यस्तो जादुमय मिडफिल्डले नै जर्मन जितको आधार स्तम्भ तयार गर्नेछ।
२१ बर्षिय लियोरे सानेको ठाउँमा ३४ बर्षिय मारियो गोमेजलाई अग्ररेखाको जिम्मा दिनु जर्मन र योचिम लोका लागि घातक हुने खेल पन्डितहरुको अनुमान छ। सँधै घाइते भइरहने मार्को रियस र ईके गुडोआन र आउट अफ फम रहेका मेस्ट ओजिलले पनि लोलाई समस्यामा पर्ने देखिन्छ।
बुढो जर्मन (कमजोर पक्ष)
२०१४ को बिश्वकप जित्ने जर्मनी टिमका खेलाडीहरुको औसत उमेर २६.३ बर्ष थियो। र, यो बिश्वकप २०१८ का लागि घोषणा गरिएको जर्मन टिमको औसत उमेर २७.१ बर्ष छ। तुलनात्मक रुपमा यो बृद्धि खासै ठूलो अन्तर होइन र यो तथ्यांकका अनुसार अरु प्रतियोगी टिमको तुलनामा जर्मन टिम बुढो पनि होइन। तर, ध्यान राख्नुपर्ने के हुन्छ भने जर्मनका लागि खेलको पहिलो ११ भित्र पर्ने खेलाडीहरुको उमेर हो। २०१४ का स्टारहरु म्यानुएल नेओर, मेसट ओजिल, समी खदिरा लगायत आफ्नो खेल जीवनको उत्तरार्धमा छन्। साथै, तुलनात्मक रुपमा उनीहरुको प्रदर्शन खस्किएको छ र पात्रहरु त्यही चार बर्ष अघिको भएपनि खेल चाहिँ फरक छ। प्रायः फुटबल खेलाडीहरु २६/२७ को उमेरमा क्यारियरकै उत्कृष्ट लयमा हुन्छन्। २०१४ को त्यो विजेता जर्मनी टोली अहिले ३० बर्षको हाराहारीमा छ र उसमा त्यही पुरानो धार भने छैन। स्क्वायडमा थुप्रै युवा प्रतिभाहरु भएता पनि पहिलो ११ मा यिनै पूर्वविजेताहरु नै योचिमका पहिलो रोजाइ हुनेछन्। २१ बर्षिय लियोरे सानेको ठाउँमा ३४ बर्षिय मारियो गोमेजलाई अग्ररेखाको जिम्मा दिनु जर्मन र योचिम लोका लागि घातक हुने खेल पन्डितहरुको अनुमान छ। सँधै घाइते भइरहने मार्को रियस र ईके गुडोआन र आउट अफ फम रहेका मेस्ट ओजिलले पनि लोलाई समस्यामा पर्ने देखिन्छ। साथै, लगातारको सफलताले गर्दा जर्मन टिममा उपाधि भोकको कमी देखिएको छ। पछिल्लो केही अभ्यास खेलहरुमा त्यही देखिएको छ। यस्तै निरन्तरको सफलतापछिको उपाधि भोकको अभावले २०१० को बिश्वविजेता स्पेनको हालत के भयो भन्ने त सबैलाई थाहा छ।
प्लेयर टु वाच फर
जर्मन फुटबलको पहिलो पहिचान यो हो कि जर्मन कुनै खेलाडी विशेषको टिम होइन। उनीहरु स्टार भ्यालु भन्दा पनि टिम गेममा विश्वास गर्छन। एक युनिटका रुपमा रही जर्मन टिमका सबै एघार खेलाडीले टिम रणनीति अनुसार आफ्नो सय प्रतिशत दिन्छन्।
यस पटक जर्मनका लागि महत्त्वपूर्ण खेलाडी रियलका मिडफिल्डर टोनी क्रुज हुनेछन्। सेट पिसका बादशाह २८ बर्षिय क्रुजलाई संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सेन्ट्रल मिडफिल्डर मानिन्छ। साथै, लाईचपिकका २१ बर्षिय युवा स्ट्राइकर टिमो वेर्न्रर अर्को सम्झनु पर्ने नाम हो। जर्मनलाई कन्फेडेरसन्स कप जिताउने नायक टिमोलाई जर्मन घरेलु लिगमा गोल मेशिनको उपनाम दिइएको छ। १०० मिटरको दूरी केवल ११ सेकेन्डमा पूरा गर्ने टर्वो टिमोलाई लेजेन्डरी मिरोसोलाभ कोल्जेसँग तुलना गरिन्छ। यसपटकको बिश्वकपको गोल्डेनबुटका पनि दावेदार मानिएका टिमोको प्रदर्शनमा नै जर्मन टिमको विश्वकप यात्रा कस्तो हुने भन्ने तय गर्नेछ।
रोड टु ग्लोरी
विश्वकप जित्ने आफ्नो पाँचौ दावेदारीसहित रसियन भूमिमा उतारेको जर्मनी टोली उत्कृष्ट लयमा छ। बिश्वकप युरोपियन छनौटको आफ्नो ग्रुपको सबै दश खेलमा शतप्रतिशत जितेर बिश्व कृतिमानी बनाएको थियो। टिम जर्मन यसपटकको बिश्वकपमा समूह ‘एफ’ अन्तर्गत मेक्सिको, स्वीडेन र कोरिया रिपब्लिकसँगै रहेको छ। तुलनात्मक रुपमा सजिलो ग्रुपमा रहेको टिम डिउ्चाले समूह टप गर्ने सम्भावना छ। ग्रुप टप गरेमा जर्मनको प्रि-क्वाटर भिडन्त सम्भवतः कोस्टारिका वा स्वीजरल्याडसँग हुनेछ। सम्भावनाकै आधार केलाउँदा अन्तिम आठमा जर्मन प्रतिस्पर्धी बेल्जियम, बेलायत वा कोलम्बिया हुन सक्नेछ। र, सेमिफाइनलको भिडन्त सम्भवत् स्पेनसँग हुने आकंलन गरिएको छ। तथ्यांकशास्त्री अचिम जिलियसको अनुसार ब्राजिल र जर्मनीको फाइनलमा भिडन्त हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ। ब्राजिलमाथि मनोबैज्ञानिक दबाब राख्ने टिम जर्मनको उपाधि रक्षाको सम्भावना निकै बलियो छ।
जर्मनले फुटबल केवल जित्नका लागि खेल्दछ। चाहे धेरै गोल गरेर होस्, एक गोलको अन्तरले होस् या पेनाल्टी सुटआउटमार्फत होस् जर्मनको फुटबल मैदानमा एकमात्र लक्ष्य जित हो। तपाईंलाई जर्मनको गेम ब्राजिल, अर्जेन्टिना वा कुनै साउथ अमेरिकी टिमहरुको जस्तो आकर्षक नलाग्न सक्छ तर असरदार भने अवश्य लाग्नेछ।जर्मन टिमले कहिले पनि आफ्ना समर्थकहरुलाई निराश बनाउँदैन्न। यो बिश्वकप २०१८ मा जर्मनको लक्ष्य पाँचौ पटक उपाधि जितेर ब्राजिलसँगै सबैभन्दा धेरैपटक बिश्वकप जित्ने राष्ट्र बन्ने हुनेछ।